Dialogue (My Sketch) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Dialogue (My Sketch)	Posted by mm thinker on August 25, 2007
Posted in: Dialogue.	Tagged: Dialogue.	Leaveacomment
ဒိုင်ယာလော့ ၁ (ကျွန်ုပ်၏ပုံကြမ်း)
Q လူသားထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ဘာမှမရှိပါဆိုတော့ ခင်ဗျားဟာ လူသားဗဟိုပြု
A ဒီစာသားကို တင်ထားတာ ဒီဝါဒကို ထင်ဟပ်ဖို့ မဟုတ်ပါ ။ စဉ်းစားတွေး ခေါ်ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ၀ိသေသ ထုတ်ပေးတာ၊ မီးမောင်းထိုး ပေးတာပါ။
Q ခင်ဗျားက ဒဿနသမားလို့ Claim လုပ်ထားလေတော့ ဘာဝါဒကို စွဲထားတာတုန်း။
A ကျုပ်ချင့်ချိန်ပြီး ဖြေရမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က …
၁၊ ဘာသာမရှိဘူး။ မရှိသေးတာထက် မရှိတော့တာဆို ပိုမှန်လိမ့်မယ်။
၂၊ ကျုပ်ကိုကျုပ် တံဆိပ်မကပ် မနေရ ဆိုရင်တော့ဖြစ်တည်မှုပဓာန၀ါဒီ (Existentialist) လို့ ၀န်ခံချင်တယ်။ သို့သော် ဤသည်မရွေး အနောက်တိုင်းက အိက်ဇစ်တွေလိုပဲလို့ မယူစေလိုဘူး။ အရှေ့တိုင်းရဲ့ ကာလ၊ ဒေသ နောက်ခံမှာ ဖြစ်တည်တာပါ။ ကျုပ်တို့ နိင်ငံမှာ အိက်ဇစ်လို့ ၀န်မခံတဲ့၊ အိက်ဇစ်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒဿန၀ါဒ၊ အယူအဆတွေဟာ ဖြစ်ပြီး၊ ဖြစ်ဆဲ သမိုင်းအလျဉ်နဲ့ ကင်းကွာမနေပါဘူး။ တိုက်ရုိုက်ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဒဿန၊ အယူဝါဒတွေကို Export, Import ကုန်ပစ္စည်းလို အောက်မေ့ မှတ်ထင်တဲ့သူတွေ ကို ဒဲ့ပြောချင်တာပါ။ ဒီလို စွပ်စွဲသူတွေဟာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ၀ါဒတွေမှာ မှောင်ကျ ၊ အမှောင်ချထားခံရသူတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဗုဒ္ဓ္ဓ၀ါဒကို သက်ဝင်လှချည်ရဲ့ ဆိုသော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့ ၀ိဘစ္စ၀ါဒ ကျတော့ မသက်ဝင်နိင်တာမျိုးပေါ့ ။
( မြန်မာ Existiantialsim နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ထပ်မံ ဆွေးနွေးပါမယ်။)
← The Dislocation of Nonbelonging	Art Work →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...